रगत दबाब प्रति एकाइ समय हृदयको पम्प्ड रगतको मात्रा मतलब। धेरै उच्च दबाव रगतको हृदय बायाँ ventricle यसका जारी समयमा अवलोकन छ। धमनिहरु आफूलाई रक्तचाप अलिकति कम। को capillaries गर्न सार्दा थप कम छ। शिरापरक रक्तचाप कम हुन विशेष गरी सही Atrium को प्रवेश मा, मानिन्छ। हाम्रो शरीर को विभिन्न भागहरु मा रक्तचाप एक फरक डिग्री छ। को सिस्टोलिक र diastolic रक्तचाप के हो? तिनीहरूलाई कस्तो भिन्नता छ?
सिस्टोलिक रक्तचाप यस महत्वपूर्ण प्यारामिटर को माथिल्लो अंक छ। यो सूचक क्षणमा दबाव को स्तर झल्काउँछ को संकुचित गर्दा हृदय को मांसपेशी, रगत पैदा धमनिहरु मा धक्का छ। यो पढाइ हृदय को मांसपेशी को संकोचन शक्ति मा पूर्ण रुपमा निर्भर हुन्छ।
चिकित्सा मा, diastolic रक्तचाप तल्लो नम्बर सेटिङ हुन मानिन्छ। यो सूचक हृदय को मांसपेशी को पूर्ण विश्राम समयमा दबाब मापदण्डहरू झल्काउँछ। यो दबाब धमनिहरु न्यूनतम दबाव छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। रक्तचाप oscillation आयोम को सूचक सबै जहाजहरू गर्न रगत प्रवाह को आन्दोलन को रूप गिर। महत्वपूर्ण बिन्दु को केशिका र शिरापरक दबाव हृदय चक्र चरणहरु को लगभग स्वतन्त्र छ भन्ने छ।
सिस्टोलिक र diastolic दबाब अधिकतम मान र महत्वपूर्ण मान छन्। यसरी, रक्तचाप को दर 120 / 80mm.rt.st. भित्र स्थित एक सूचक मानिन्छ यो सूचकांक माथिल्लो र तल्लो मूल्य बीच इष्टतम फरक 30/40 को अनुपात छ। यो फरक सामान्यतया नाडी दबाव भनिन्छ।
सिस्टोलिक र diastolic रक्तचाप व्यक्ति को स्वास्थ्य को सामान्य राज्य संकेत जो धेरै महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक, छन्। त्यसैले केही मानिसहरू त्यहाँ एक आवधिक रक्तचाप वृद्धि आदर्श सापेक्षित छ। यो लक्षण उच्च रक्तचाप भनिन्छ। तल सामान्य रगत दबाव अध्ययनहरू को दिगो मूल्य भनिन्छ hypotension। आदर्श देखि एक यस्तो विचलन रोग उच्च रक्तचाप वा hypotension परिणाम हुन सक्छ।
उमेर पचास वर्षभन्दा मानिसहरूलाई मा सिस्टोलिक र diastolic रक्तचाप, एक राम्ररी निदान योग्य यो उमेर मा मान्छे विशेष अत्यधिक को हृदय प्रणाली को विभिन्न रोगहरु को विकास गर्न susceptible कारण। यी दुई प्यारामिटर देखि, संकेतक लागि राम्ररी अनुगमन गर्नुपर्छ वृद्ध को सिस्टोलिक दबाव छ। अधिकतम अनुज्ञेय सीमा सामान्य दबाव को मान्छे वृद्ध मूल्य लागि 140 / 90mm.rt.st. छ सामान्यतया, यो स्तर तल अध्ययनहरू सामान्य मानिन्छ, तर diastolic रक्तचाप यदि, उमेर बिना पनि मूल्य 90mm.rt.st. कारण मा लागि गम्भीर चासो खडा नाघेको छ।
रक्तचाप आदर्श सामान्य मूल्य एक प्यारामिटर कुनै पनि विचलन रोग को विकास संकेत रूपमा, आदर्श अनुरूप गर्नुपर्छ। तपाईं कुनै पनि रक्तचाप भेरिएसनहरूमा छ भने, यो तुरुन्त चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् गर्न मनमोहक छ। मात्र एक विशेषज्ञ सही ढंगमा विचलन को कारण र यसको उन्मूलन को विधिहरू निर्धारण गर्न सक्षम हुनेछ।
हृदय अनिवार्य हाम्रो जीवन भर संकुचित र decompressed छ कि एक मांसपेशी किनभने, यो अन्ततः लगाउने गर्न सक्नुहुन्छ। को सिस्टोलिक र diastolic दबाव हृदय को मांसपेशी को सामान्य राज्य झल्काउँछ, र यसको काम कुनै पनि उल्लंघन किनभने यी महत्त्वपूर्ण संकेतक को तुरुन्तै दृश्यात्मक हुनेछ।
जन्म अघि ट्राफिक जाम के के हुन्? जब पात र जन्म अघि प्लग को रंग?
चिकित्सा पूर्व-ड्राइव निरीक्षण voditetey: को, लेखा जर्नल आदेश
उत्पादन रूपमा शरीर देखि अतिरिक्त पानी: edema छुटकारा रही
राम्रो Vacuums विनिर्देशों र समीक्षा
घाइते पहिलो सहायता - जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कौशल
नोवी ररेन्जोको जनसंख्या: वर्णन, रचना, रोजगार र बल